Nyaya Yekuti Zanu PF Yoramba Hwaro hwesarudzo Yoshorwa neVamwe
Chikunguru 14, 2011
Nyaya yekuti Zanu PF yava kuramba kutambira hwaro hwesarudzo kana kuti election roadmap, iyo iri kunzi nevari munhaurirano ishandiswe pakuitwa kwesarudzo dzakasununguka, inyaya ingangodzosera kumashure matanho anga asvikwa pakuedza kugadzirisa zvinhu muZimbabwe.
Politiburo yeZanu PF inonzi yakasunga neChitatu kuti haidi hwaro hwesarudzo uhu, uye inoda kuti sarudzo dziitwe chete gore rino, kunyange hazvo pasingatarisirwi kuti bumbiro idzva remitemo riri kunyorwa rinenge rapera.
Mapato maviri eMDC ari kuda kuti patange paumbwa hwaro hwesarudzo, izvo zvinonzi zviri kutsigirwawo nemuyananisi mugakava remuZimbabwe, VaJacob Zuma.
Zanu PF iri kupomerawo MDC, zvikuru inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai, mhosva yekuzvuva makumbo pahurongwa hwebumbiro idzva, kuitira kuti sarudzo dzisaitwa gore rino.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, uye vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition, VaDewa Mavhinga, vaudza Studio 7 kuti nyika haifanirwi kuiswa parumananzombe neZanu PF nekuti iri kuda sarudzo gore rino. VaMavhinga vati munyika munofanirwa kutanga maitwa mava nehwaro hwesarudzo pozotaurwa nezvesarudzo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika, uye vakarerekera kuZanu PF, VaGoodson Nguni vatiwo Zanu PF yaneta kushanda muhurumende yemubatanidzwa, iyo isiri kushanda zvakanaka, zvinove zvoita kuti ide sarudzo gore rino.
Hurukuro naVaDewa Mavhinga pamwe naVaGoodson Nguni